China Jack, jack ovundlile, jack mpo, umfutholuketshezi jack ifektri abakhiqizi | Boda
UJack usetshenziswa kakhulu ezimbonini, ezimayini, ezokuthutha nakweminye iminyango njengokulungiswa kwezimoto nokunye ukuphakamisa, ukusekela neminye imisebenzi. Isakhiwo sikhanya, siqinile, siyaguquguquka futhi sinokwethenjelwa, futhi singathwalwa futhi siqhutshwe ngumuntu oyedwa.
UJack uyimishini elula yokuphakamisa enokuphakama okuncane okuphakamisa (ngaphansi kuka-1m). Inezinhlobo ezimbili: eyomshini ne-hydraulic. Ijack eyimishini ine-rack uhlobo nohlobo lwesikulufu. Ngenxa yomthamo wayo omncane wokuphakamisa nokusebenza kanzima, imvamisa isetshenziselwa ukugcinwa kwemishini futhi ayifanele ukulungiswa kwebhuloho. I-Hydraulic jack inesakhiwo esihlanganisiwe, umsebenzi ozinzile nomsebenzi wokuzivala, ngakho-ke isetshenziswa kabanzi. Ububi bayo ukuthi ukuphakama kokuphakamisa kunqunyelwe futhi isivinini sokuphakamisa sihamba kancane.
Ngokuya ngemigomo ehlukene yokukhiqiza, kukhona amajack ngomshini namajack wokubacindezela. Izimiso zihlukile. Empeleni, umgomo oyisisekelo wokudluliswa kwe-hydraulic umthetho kaPascal, okungukuthi, ingcindezi ketshezi iyafana yonke indawo. Ohlelweni olinganiselayo, ingcindezi efakwa ku-piston encane incane kunaleyo kwi-piston enkulu Amandla nawo makhulu, agcina uketshezi lumi.
Ngakho-ke, ngokudluliswa ketshezi, singathola izingcindezi ezahlukahlukene ezinhlokweni ezahlukahlukene, ukuze sikwazi ukufeza inhloso yenguquko. Ijack yethu ejwayelekile ye-hydraulic ukusebenzisa lesi simiso ukufeza ukudluliswa kwamandla. Isimiso sokusebenza se-screw jack ukudonsa isibambo emuva naphambili, ukudonsa uzipho ukusunduza imvume ye-ratchet ukuze ijikeleze.
Igiya elincane lensimbi lishayela igiya elikhulu lenotho futhi lenza isikulufa sokuphakamisa sizungeze, ukuze umkhono wokuphakamisa ungaphakanyiswa noma wehliswe
ukufeza umsebenzi wokususa ukungezwani. Kepha hhayi njengokulula njengojack wokubacindezela.
Umehluko phakathi kukajack ovundlile nejack mpo ngukuthi: kulula ukusebenza, umthamo omkhulu wokuphakamisa ujack ovundlile, ofanele izimoto ezinkulu. Ijack ime mpo kulula ukuyisebenzisa futhi ilungele inqola.
I-jack evundlile: usebenzisa isimiso se-hydraulic, esihlukile ku-jack yendabuko yemishini, kuyithuluzi lokuphakamisa iloli elinokusebenza okulula, ukuphepha, ukuthembeka, ukonga abasebenzi kanye noketshezi oluqinile.
Namuhla, inqobo nje uma kupakwa noma egalaji likaphethiloli, ungabona i-crane hydraulic, ukuyisebenzisa ukuze usebenzise amandla engane ingaphakamisa imoto.
I-BOSENDA inikeza uchungechunge lwe-jack emakethe yaphesheya kwezilwandle, singenza i-OEM ne-ODM, ukuthola eminye imininingwane, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Isibhamu seglue esishisayo, isibhamu seglue yensimbi kagesi, isibhamu somoya oshisayo, isibhamu seplastiki, insimbi yokuthwebula
Umfutholuketshezi Uzwane Jack